मूल्य समायोजनपछि मञ्जुश्री फाइनान्ससहित यी ५ कम्पनीको सेयरभाउ कति ? Bizshala -
मूल्य समायोजनपछि मञ्जुश्री फाइनान्ससहित यी ५ कम्पनीको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि मञ्जुश्री फाइनान्ससहित ५ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मञ्जुश्री फाइनान्ससहित चिलिमे हाइड्रोपावर, समिट लघुवित्त, इन्फिनिटी लघुवित्त र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता मञ्जुश्रीको ६७०.७१ रुपैयाँ, चिलिमेको ४७६.८१ रुपैयाँ, समिटको ११६५.३४ रुपैयाँ, इन्फिनिटीको १३०७.७५ रुपैयाँ र एनआरएनको ५११.४३ रुपैयाँ कायम भएको छ।
यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता मञ्जुश्रीको ९३९ रुपैयाँ, चिलिमेको ५०२.९० रुपैयाँ, समिटको १४६० रुपैयाँ, इन्फिनिटीको १६७० रुपैयाँ र एनआरएनको ५३७ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यी कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउनेछन्।
लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यी कम्पनी आज पुस १५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसको अर्थ हिजो पुस १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरु यी कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य भएका छन्।
मञ्जुश्रीले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ४० प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद (करसहित) छन्।
प्रस्तावित लाभांश मञ्जुश्रीको यही पुस २९ गते हुने १४ औँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसैगरी चिलिमे हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्षका लागि ७.५ प्रतिशत बोनस र ७.५ प्रतिशत नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांश कम्पनीकोे यही पुस २३ गते हुने २५ औँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीले पाउनेछन्।
समिट लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २५.२८५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित बोनस सेयर संस्थाको यही पुस २४ गते हुने १३ औँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
इन्फिनिटी लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २९.१६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा २७.७ प्रतिशत बोनस र १.४६ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनार्थ) छन्।
प्रस्तावित लाभांश संस्थाको यही पुस २७ गते हुने पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनार्थ ०.२६ प्रतिशत नगद (करसहित) छन्।
प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको यही पुस २९ गते हुने नवौँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीहरुले पाउनेछन्।